Other Phones - Browse Smartphones | Samsung Myanmar
ခေါက်၍ရသော စမတ်ဖုန်းများနှင့် သင့်ကမ္ဘာကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါ
အားကောင်းသော စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အတူ S Pen
အားလုံးအသုံးပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Galaxy ရဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု
သင်နှစ်သက်မယ့် ဈေးနှုန်းနဲ့အတူ စွမ်းအင်နဲ့ အမြန်နှုန်း
အသစ်ဆုံး အများဆုံးနှိပ်သောအရာ ထောက်ခံပေးနိုင်သောအရာ
အားလုံးကိုရှင်းလင်းပါ နှိုင်းယှဉ်ပါ (3/3)
တြဲဖက္သံုးမရသည့္ ထုတ္ကုန္ အမ်ိဳးအစား
* ကွန်ရက်: ကိရိယာတွင်း ထည့်သွင်းထားသော ဘန်ဝစ်များသည် ဒေသအလိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူအလိုက် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်
* ဘက်ထရီ: အမှန်တကယ် ဘက်ထရီ သက်တမ်းသည် ကွန်ရက် ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသုံးပြုသော အင်္ဂါရပ်များ နှင့် အက်ပ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှု နှင့် မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့သုံးစွဲမှု အကြိမ်ရေ၊ အားသွင်းသည့် အကြိမ်ရေ နှင့် အခြားအချက်များပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
* သုံးစွဲသူ ရနိုင်သည့် သိုလှောင်မှု: စီမံလည်ပတ်မှု စနစ် နှင့် ကိရိယာ ဖီချာများကို စီမံလည်ပတ်ရန် အသုံးပြုသော ဆော့ဖ်ဝဲ သိုလှောင်မှုကြောင့် သုံးစွဲသူအတွက် သိုလှောင်မှုမှာ ပို၍ လျော့နည်းပါသည်။ သုံးစွဲသူအတွက် အမှန်တကယ် သိုလှောင်မှုသည် အော်ပရေတာပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဆေ့ာဖ်ဝဲ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
*Galaxy Z Fold3 5G and Z Flip3 5G is rated as IPX8. IPX8 is based on test conditions for submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes. Not advised for beach or pool use. Not dust resistant.